Ubuhle | Eyedwarha 2021
Kwiintsuku ezili-10 Umzimba wakho uya kujika ulunge, zama la malungiselelo asekhaya!
Ixesha lokwenza umzimba wakho ulunge ekhaya, ngokwendalo, ngoncedo lwezi ndlela zilula zasekhaya. Konke okufuneka ukwenze kukusebenzisa ezi zithako emzimbeni wakho dai
Izithako zeKhitshi ezili-15 zokufumana ulusu olulungileyo kobu busika
Nazi izithako zekhitshi zokufumana ulusu olufanelekileyo kobu busika. Jonga.
Uyifumana njani iMilebe ePinki ngokwendalo ekhaya
Imilebe e-Rosy, ethambileyo kwaye etyebileyo ifunwa ngabo bonke. Kodwa sihlala sijongana nomba wemilebe emnyama neyomileyo. Ukunceda ukulwa naloo nto, sidibanise iingcebiso kunye namayeza amangalisayo anokukunceda ukuba ube nemilebe egudileyo kunye entle.
Iindlela ezili-15 zeNdalo zokuLahla iinwele zobuso ngokusisigxina
Izinto zendalo ezinje nge-aloe vera, ipapaya, iturmeric, ubusi, i-rosewater, isiselo se-anyanisi, ibasil, amagqabi, i-lavender yeoyile efunekayo, ioyile yomthi weti, phakathi kwezinye zinceda ekususeni iinwele zobuso xa zisetyenziswa ngokwezihloko.
Izilungiso ezi-8 zeKhaya eziLungileyo zeNwele ezithambileyo neziSilky
Ukuba ukhangele amayeza asekhaya okwenza ukuba iinwele zakho zithambe kwaye zibe mpuluswa, uludwe lwamayeza akho asekhaya!
Iipakethe ezili-10 zeAloe Vera zoLusu olunamafutha
Hlanganisa i-aloe vera gel kunye nezithako ezinje ngobusi, i-oyile ye-olive, i-multani mitti, i-besan, i-rosewater, ikhukhamba, i-oatmeal, i-sandalwood powder, i-glycerin ukwenza iipakethe zobuso ezenziwe ekhaya ezinolusu olunamafutha.
Ezona ndlela zibalaseleyo zokuNciphisa ukukhula kweenwele kwiChin
Izinwele ezikhulayo esilevini yingxaki eqhelekileyo yobuso ejongene nabasetyhini. Ukulawula nokususa iinwele zesilevu, nazi iingcebiso onokuzilandela.
Unyango lweKhaya oluLungeleleneyo lokuLahla iinwele ezisondeleyo
Jonga la mayeza amangalisayo asekhaya okususa iinwele ezingafunekiyo kwindawo yakho esondeleyo ngokusisigxina!
Unyango olusebenzayo lwasekhaya olu-8 lokususa iinwele zomlomo ongasentla
Ngaba ujonge indlela engenabuhlungu yokususa iinwele zomlomo ongasentla? Nazi ezisibhozo zazo! Jonga la mayeza asekhaya okususa iinwele zomlomo ongasentla ngokwendalo.
Unyango lwasekhaya oluyi-5 lokukhulisa izipikili ngokukhawuleza!
Ukuba udiniwe kwaye ukhathazekile ngezikhonkwane ezimfutshane okanye ezaphukileyo, zama ukusebenzisa amayeza endalo afana neebhanana, amaqanda, ioyile yentlanzi, iiavokhado, iiwis, ubusi, ubisi, iiorenji kunye neelamuni. Ezi zithako ziya kugcina iinzipho zakho zisempilweni kwaye ziya kukhuthaza ukukhula ngokukhawuleza kweenzipho.
Iindlela ezisibhozo zokwenza ulusu lwakho luqaqambe ngokuhlwa
Ngaba ujonga iingcebiso zokwenza ulusu lwakho luvuthe ubusuku bonke? Eli nqaku lijonga amaqhinga athile azame ukuvavanywa anokunceda ekuvuseleleni isikhumba sakho esikhangeleka buthuntu kunye nokunyusa ukukhanya kwaso. Funda ukuze wazi ngakumbi.
Izitayile zaseMzantsi Indiya zokutshata.
Kuluhlu kweli nqaku kukho iinwele zomtshato zaseIndiya ezisemazantsi. Thatha ujongo.
Iindlela ezili-17 zeNdalo zokuLungisa iinwele zakho ekhaya
Unyango lwasekhaya olufana nesigqubuthelo seqanda kunye neoyile yeoyile, ubisi kunye nemaski yobusi, ibhanana kunye nemaski yepapaya njl njl, zinokusetyenziselwa ukulungisa iinwele ngokwendalo.
Iipakethe zerayisi ezili-11 zobuso boLusu oluKhanyayo
Isetyenziswa ukusukela kumaxesha amandulo ukukhanyisa kunye nokuqaqambisa ulusu, ukusetyenziswa komgubo wengqolowa welayisi kunokondla ulusu lwakho. Nazi iindlela ezilishumi elinanye zokusebenzisa umgubo welayisi ukufumana isikhumba esikhanyayo.
Izinto ezenziwa kunye nezinto ongazenziyo emva koLungiso lweeNwele eziSisigxina ekufuneka uyazi iRN
Izinwele eziphathwe ngekhemikhali lunyango ekujongwa kulo. Kodwa lukhathalelo emva kokubaluleka kwaye olunokukunika ukulala ebusuku. Kule nqaku, sithetha malunga neenkcukacha kwaye sikuxelele ukuba zeziphi kanye izinto ezenziwayo kunye nezinto ongazenziyo emva kokulungiswa kweenwele.
Susa i-Tan ezandleni zakho usebenzisa ezi zilungiso
Bangaphi kuni abathi bathathe ixesha labo behoye izandla? Sonke sikhathazekile malunga nokuba ulusu ebusweni bethu lubonakala njani kodwa siyalutyeshela ulusu olusezandleni zethu. Zama la mayeza okususa i-tan angasusa i-tan ngokusisigxina.
Iindlela ezili-10 ezimangalisayo apho amaqanda azuza khona kulusu kunye neenwele
Iqanda yinto yolusu kunye neenwele oya kuyithanda. Jonga izibonelelo ezintle zobuhle zamaqanda kunye nendlela yokusebenzisa amaqanda ukunyanga imiba eyahlukeneyo yolusu kunye neenwele.
Unyango lweNdalo olu-18 lokususa iringi emnyama ngakuMlomo
Isikhumba esimnyama okanye amakhonkco amnyama ajikeleze umlomo anokunyangwa kusetyenziswa izinto zendalo ezinjengelemoni, ioyile yekhokhonathi, ijusi yetumato, iitapile, ioyile yomnquma, njl.
Iipakethe ezili-10 zobuso beRosewater zoLusu oluKhanyayo
Unokwenza iipakethe zobuso ezenziwe ekhaya usebenzisa i-rosewater ngokudibanisa nezinto ezahlukeneyo ezinje nge-aloe vera, ubusi, iyogathi, imultani mitti, phakathi kwabanye.
Ungayisusa njani ingono yeenwele ngokusisigxina ekhaya usebenzisa iindlela zendalo
Iinwele zeengono ngokuqinisekileyo aziqhelekanga kodwa ayiqhelekanga. Kwaye ukuba bayakukhathaza, nazi iindlela zendalo, ezikhuselekileyo nezingenabuhlungu zokususa ingono yengono ngokusisigxina ekhaya.
ukunciphisa umzimba 1 ngeveki ekhaya
itshathi yokutya indian yesigulana sentliziyo
I-sooji ilungele ukunciphisa umzimba
Isinxibo se-deepika padukone kwi-bajirao mastani
ukutya okutyebileyo kwesinyithi kwimifuno yamaNdiya
indlela yokunciphisa amanqatha esisu ekhaya ngokwendalo